स्वास्थ्य « epurwa
बिर्तामोडमा क्यान्सर अस्पताल
झापा, मंसिर २७ । झापाको बिर्तामोडमा तीन सय शैयाको क्यान्सर अस्पताल बन्ने भएको छ । बी एण्ड सी हस्पिटलले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको निर्माणका लागि आज भवनको शिलान्यास गरेको हो ।
पूर्वी रुकुममा अज्ञात रोगका कारण एकको मृत्यु, ८० भन्दाबढि बिरामी
रुकुम, १९ मंसिर । पूर्वी रुकुममा एक जनाको अज्ञात रोगका कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका ९ की सान्नानी विकको मृत्यु भएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्
आयुर्वेद उपचार पद्धतिप्रति सर्वसाधारणको रुची बढ्दो
बिर्तामोड, मंसीर १८ । झापामा आयुर्वेद उपचार पद्धतितर्फ सर्वसाधारणको रुची बढेसँगै यससँग दक्षता हासिल गरेका चिकित्सकले समेत निजीस्तरबाट सेवा शुरु गरेका छन् । केही समय अघिसम्म ओझेलमा परेको आयुर्वेद उपचार
स्वास्थ्य महोत्सवमा १७ हजार सर्वसाधारणले लिए सेवा
झापा, मंसिर ९ । झापा विर्तामोड रहेको वीएण्डसी टिचिङ हस्पिटलमा सम्पन्न पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सवमा करिव १७ हजार सर्वसाधारणले सेवा लिएका छन् । हस्पिटल प्रशासनले शनिवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वास्थ्य
एक्लै हुनुहुन्छ! हार्टअट्याक भयो तपाई संग १० सेकेण्ड समय हुन्छ, यसो गरे तपाई बच्नुहुन्छ !
हार्टअट्याकका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । हार्टअट्याकले धनी वा गरिव भन्दैन । यो रोगले उमेर पनि भन्दैन । सानो तथा ठूलो जोसुकैलाई आक्रमण गर्न सक्छ । हार्टअट्याक यो
बिर्तामोडमा स्वास्थ्य महोत्सव सुरु, वामगठबन्धनका शिर्ष नेता ओली र दाहालद्वारा स्वास्थ्य परिक्षण
झापा, मंसिर २ । झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटलमा शनिबारबाट पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सव सुरु भएको छ । महोत्सवको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
एकाग्रता बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् एकाग्रता बढाउने खानेकुरा
स्मरण शक्ति बढाउने, मानसिक क्षमता बढाउने विभिन्न खालका खानेकुरा वा भोजनबारे अनेकौं कुरा सुनिन्छ । तर त्यस्ता खानेकुराले साँच्चै नै स्मरण शक्ति र मानसिक क्षमता बढाउँछन् त ? हाम्रो उमेर बढ्दै
के मानव र रोबटको सहवास सम्भव छ?
लन्डन– रोबटबारे लेख्ने एक जना लेखकले आफ्नो रिपोर्टमा भनेका छन्, ‘बालबालिकाजस्ता देखिने सेक्स रोबट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।’ प्रोफेसर नोएल सार्की एउटा समाजका रुपमा हामीले सबैखाले सेक्स रोबटबाट पर्ने असरसम्बन्धमा गहिरो सोचविचार
यौन सम्पर्कबाटै ठिक हुन्छन केही यस्ता रोग हरु
वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् । आमरुपमा सेक्सबाट यति सुख मिल्छ कि शरीर
बिर्तामोडमा स्वास्थ्य महोत्सव हुने
बिर्तामोड, कार्तिक २३ । झापाको बिर्तामोडमा पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सव हुने भएको छ । आगामी मंसिर २ गतेदेखी ६ दिन सम्म महोत्सव सञ्चालन हुने आयोजक बिएण्डसी हस्पिटलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी